About Counter-Strike 1.6 ► Counter Strike 1.6 Download
Aprily 16, 2019	Off	By roma
About Counter strike andian-dahatsoratra
Counter strike dia lalao mpitifitra olona voalohany amin'ny Internet izay navoaka voalohany ho toy ny fanovana Half-Life nataon'i Minh "Gooseman" Le sy Jess Cliffe tamin'ny 1999 ary taty aoriana tamin'ny 2000 Counter-Strike navoakan'i Valve teo amin'ny sehatra Microsoft Windows. Vetivety dia lasa iray amin'ireo lalao mpitifitra malaza eran-tany ny lalao.
Ity dia lalao an-tserasera haingana sy mifantoka amin'ny ekipa - ny mpilalao dia afaka misafidy na mpampihorohoro na mpanohitra mpampihorohoro. Mifandona ny ekipa roa mandra-pandreseny ny iray. Ny ekipa, izay mahavita mamono ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipan'ny fahavalo, dia lasa mpandresy. Ary koa, misy scenario samihafa ho an'ny lalao Counter-Strike: Famonoana, famonjena takalon'aina, fanafoanana baomba.
Ny lalao dia manana sarintany maro samihafa izay mitranga amin'ny tontolo isan-karazany toy ny tanàn-dehibe, Arktika, ala ary tany efitra. Izany dia manome fahafahana ny mpilalao hisafidy amin'ny karazana tontolo tiany hilalao. Na izany aza, hatramin'ny nivoahan'ny Counter-Strike 1.6, tsy misy sarintany nampidirina na nesorina tamin'ny lalao.
Ny mpilalao dia afaka misafidy amin'ny fitaovam-piadiana isan-karazany aseho amin'ny lalao. Ny mpilalao dia afaka misafidy fitaovam-piadiana isan-karazany manomboka amin'ny antsy ka hatramin'ny basim-borona sy ny basy. Rehefa mifidy fitaovam-piadiana, ny mpilalao dia tokony handinika indray ny fomba mahafa-po ny fitaovam-piadiana ampiasaina. Ny antony iray hafa hisafidianana fitaovam-piadiana dia noho izy io na tsara feo. Ny fepetra hafa dia ny realisme mamaritra ny fitaovam-piadiana mety hampiasain'izy ireo amin'ny toe-javatra iadiana amin'ny tena fiainana.
Iray amin'ireo farany Counter strike kinova, Counter-Strike 1.6, dia fanavaozana votoaty lehibe ho an'ny lalao ary ny laharan'ny dikan-teny dia malaza be ankehitriny ary matetika ampiasaina hanavahana ny lalao tany am-boalohany amin'ny andiany sisa. Eto ianao dia afaka mora foana counter strike 1.6 misintona fanamboarana pc ary apetraho amin'ny solosainao ny lalao.
Amin'izao fotoana izao CS 1.6 angamba no dikan-lalao CS fanta-daza indrindra eran'izao tontolo izao ary matetika ampiasaina amin'ny olona avy amin'ny firenena samihafa.
Counter-Strike 1.6 Navoaka voalohany tamin'ny 13 Janoary 2003. Ity dikan-lalao ity dia manana endri-javatra vaovao maro avy amin'ny taloha:
Sarintany novaina sy nohatsaraina
Niampy fomba fijery widescreen ho an'ny fitaovana manohana azy
Niampy zoom sy fahasalamana ao amin'ny HLTV
Fotoana fanatsarana nohatsaraina hidirana amin'ny mpizara
Fanatsarana nohatsaraina sy fanaraha-maso ny fivezivezena
Koa satria Counter-Strike 1.6 dia iray amin'ireo lalao shooter malaza indrindra eran-tany, misy fanovana maro isan-karazany sy dikan-teny vaovao. Ny sarin'ny lalao, ny bibikely ary ny fivoaran'ny singa hafa dia atao tsy tapaka amin'ireo dikan-teny nohavaozina mba hampitombo ny lazany.
Na dia efa antitra aza ny lalao, dia tampoka ny lazany. Manohy ny fampidinana ny olona ny kinova vaovao ihany cs misintona rakitra fa ny zokiny koa. CS 1.6 mbola mijanona ho iray amin'ireo malaza indrindra alaina lalao CS. Eto dia azonao atao Download counter strike afaka etona download. Raha mbola tsy nanao izany ianao dia araho fotsiny ireo dingana tsotra hazavaina ao amin'ny lahatsoratra etsy ambony.
Eto ianao dia afaka misintona ny iray amin'ireo vaovao indrindra XTCS counter-strike 1.6 dikan-teny farany.
Azonao atao ny mamaky ny Download counter strike 1.6 dikan-teny feno maimaim-poana famaritana rakitra eto.
Tagsabout counter strike 1.6 lalao about counter strike lalao About Counter-Strike 1.6 about cs 1.6 counter strike 1.6 Download counter strike 1.6 Download free counter strike 1.6 fametrahana feno counter strike 1.6 varavarankely 10 counter strike Download cs 1.6 Download cs misintona Download counter-strike 1.6 Download cs 1.6 lalao fampidinana counter strike
counter-strike 1.6 lalao takiana
4357 Counter-strike 1.6 mpilalao config